Golaha Ammaanka oo baaq kale oo deg deg ah ka soo saaray xaalada Somaliya kuna baaqay Wada hadal Cusub | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Golaha Ammaanka oo baaq kale oo deg deg ah ka soo...
Golaha Ammaanka oo baaq kale oo deg deg ah ka soo saaray xaalada Somaliya kuna baaqay Wada hadal Cusub
Xubnaha Golaha Ammaanka QM ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay inay si qoto dheer uga walaacsan yihiin is-mari waaga siyaasadeed iyo khilaafka u dhaxeeya hoggaamiyayaasha Soomaalida ee ku aadan hannaanka doorashooyinka.
Xubnaha Golaha Ammaanka ayaa sheegay in khilaafyada sii socda ee ku aadan hannaanka doorashada aysan baabi’ineyn oo kaliya horumarkii dhibka laga soo maray, balse ay sidoo kale dareenka ka weecinayaan dhibaatooyin joogto ah; oo ay ka mid yihiin daadadka, abaaraha, ayaxa, COVID-19, iyo la-dagaalanka halista kooxda Al-Shabaab.
Waxa ay sheegeen in heshiis laga gaaro doorashooyinka uu taagerayo fududeynta si wadista horumarka Soomaaliya iyo shacabkeeda.
“Xubnaha Golaha Ammaanka waxay hoosta ka xariiqeen in heshiis la gaaro uu muhiim u yahay hanaan kasta oo doorasho in si guul leh loo fuliyo. Waxay xuseen in heshiiska 17-ka September uu yahay aas-aaska kaliya ee ay taageereen dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dhammaan dowlad goboleedyada,” ayaa lagu yiri bayanaka.
“Sidaas darteed, xubnaha Golaha Ammaanka waxay ugu baaqayaan dhammaan dhinacyada Soomaalida inay iska diidaan rabshadaha, dibna u billaabaan wada-hadallada si deg deg ah, ayada oo aan wax shuruud ah lagu xirin.”
Waxay ugu baaqeen hoggaamiyayaasha Soomaalida inay xaliyaan arrimaha harsan, ayna hormariyaan danta shacabka Soomaaliyeed marka hore, ayna si deg deg ah isugu raacaan hanaan doorasho oo leh waqti cayiman.
Waxay intaas ku dareen in xafiiska QM ee Soomaaliya ee UNSOM, oo kaashanaya AMISOM, Midowga Afrika, Midowga Yurub, IGAD iyo saaxiibada kale ee caalamiga uu diyaar u yahay inuu caawiyo.
Xubnaha Golaha Ammaanka ayaa soo dhoweeyey codsigii Farmaajo uu u jeediyey madaxweynaha DR Congo, ahna guddoomiyaha Midowga Afrika ee ahaa inuu dhex-dhexaadiyo saamileyda siyaasadda Soomaaliya, waxayna taageero u muujiyeen dadaallo gobolka uu hoggaaminayo oo miiska wada-hadalka la isugu keeno dhinacyada Soomaalida.
Previous articleHindiya gaar ahaan Delhi oo gebi ahaanba ka dhamaaday Oksijiinkii Covid-19 loogu talagalay
Next articleSawir Murugo leh oo laga qaaday Hooya Hindiya ku nool oo ag fadhida meydka wiilkeeda oo 29 jir ah oo u dhintay Covid 19
Magaalada Jowhar ee Caasimadda Hirshabeelle oo Go’doon ku jirta, kadib ...
Magaalada Jowhar ee Caasimadda dowlad Goboleedka Hirshabeelle ayaa Go’doon ku jirta, kaddib markii tuulooyin dhowr ah oo hoostega Magaaladaas uu fatahaad xoogan ku sameeyeen...
Sacuudiga oo oo ruqsad loo siisay haweenka garoobada ah iyo...
Xaafada Nunspeet, oo u mahadcelisay Guddoomiyaha Jaaliyada Soomaalida Zwolle & nawaaxigeeda...
Safiirka Soomaaliya ee Mareykanka oo ka hadlay Arimaha Soomaaliya
Jamhuuriyadda Koongo kumanaan qof oo ka qaxay guryahooda ka...
Madaxweyne Joe Biden oo xasuuq u aqoonsaday dilalkii badnaa ee xilligii...
Mohamed Abdullahi Mohamed - April 13, 2021 0